Shiinaha Powder Metallurgy Mashiinnada Qalabka Warshadaha iyo soo saarayaasha | Welfine
Fe, Cu, FeCu alloy, steel stainliee, graphite
Sleeve, Fla Flanged, Spherical, Miniature, Trust Washer, Rod
1) gudaha 3-70mm, sidoo kale waa la codsan karaa
xirxirida gudaha: bac balaastik ah
xirxirka dibadda: kartoon, sariirtaada
Saliida la galiyay; Is saliidaynta
Xidho adeeg adkaysi leh iyo cimri dheer
Waxqabadka sare wuxuu ku jiri karaa culeys xad dhaaf ah, xawaare hooseeya oo isu roga iyo codsiyo oscillating ah
Hantida kuleylka kuleylka wanaagsan
Waxaa loo isticmaali karaa bey'ada wasakhda leh iyo wasakhda leh
Sawaxanka aad uga yar dhalista kale
Ku habboon culeyska joogtada ah ee sarreeya
Waxaa lagu codsan karaa heerkul ballaaran
U dulqaadashada caadiga ah ee gudaha dhexroor G7
Dulqaadashada caadiga ah ee dhexroor S7 ka baxsan
Kula talin dulqaad usheeda dhexe f7 / g6
Ku talin dulqaadka guryaha H7
Qaadista macdanta 'Powder metallurgy' waxay ka samaysan tahay budo bir ah iyo waxyaabo kale oo lidka ku ah maadada lidka ku ah maadada oo la riixay, la shiiday, caag ah oo la qooyay. Waxay leedahay qaab dhismeedka Ka dib soo dhexgalida saliida kulul, daloolada waxaa ka buuxa saliid saliid ah. Geedi socodka shaqada, birta iyo saliida waa kululeysaa waana la balaariyay, saliidana waxaa laga soo tuuray daloolada. Dusha sare ee khilaafku waa la saliiday. Ka dib marka ladejiyo qaboojiyaha, saliida ayaa dib loogu nuugaa daloolada.
Wareegyada budada ah ee metallurgy-ka lama saliidi karo waqti dheer.
Baaxadda sare ee saa'idka metallurgy saa'idka, kaydinta saliida badan, laakiin daloolada badan, awoodda hoose.
Dhalista noocan oo kale ah badanaa waxay ku jirtaa gobolka sifaynta isku dhafan, mararka qaarkood waxay sameysan kartaa saliid filim khafiif ah. Badanaa waxaa loo isticmaalaa in lagu kabo culeyska fudud iyo kan fudud iyo xaalada xawaare hoose ee saliidda saliidda.
Marka loo eego xaaladaha shaqada ee kala duwan, waxaa la xushay aaladda meerista macdanta ee saliidda leh. Marka saliida ay kakoobantahay, waxaa loo isticmaali karaa iyadoo aan la isticmaalin saliida duubista iyo rarka hooseeya. Waxyaabaha saliida ah waxaa loo isticmaali karaa culeys culus iyo xawaare sare. Giraanta samaynta birta birta ah ee garaafku waxay hagaajin kartaa badbaadada qaadista sababtoo ah nuuradda garaafka lafteeda. Khasaaradiisu waa in xooggu hooseeyo. Marka la eego xaaladda daxal la'aanta, waxay tixgelin kartaa xulashada qiimaha hooseeya iyo xoogga. Birta macdanta budada sita ee leh darajo sare ayaa ka saraysa, laakiin adkaanta qoorta usheeda dhexe waa in si haboon loo hagaajiyaa.
Hore: macdanta budada ee birta birta iyo naxaasta
Xiga: saliingeysid saliida mashiinka dhalmada dahaadhay
Mashiinka Mashiinka Macdanta
Soosaarida Warshadda Birta Sintered Bush ...